» कसलाई चिन्नु हुन्छ ?
२०७७ जेठ १६, शुक्रबार
कसलाई चिन्नु हुन्छ ?
२०७५ चैत्र २९,शुक्रबार ११:०३
प्रश्न धेरै गाह्रो छैन । उत्तर धेरै सजिलो छैन ।
हाकाहाकी कसैले कसैलाई तपाईँ कसलाई बढी चिन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न ग¥यो भने उत्तर दिन पहिलोचोटि जो पनि अलमलिन्छ ।
यदि मलाई कसैले सोध्यो भने म भनिदिन्छु कि म कसैलाई पनि चिन्दिनँ । मलाई थाहा छ – म आफैँलाई पनि चिन्दिनँ । यसो भन्दा खुस्केछ नभन्ठान्नु होला किनभने स्वयम् तपाईँले पनि आफूलाई राम्ररी चिन्नुहुन्न ।
इमानदारीपूर्वक भन्दछु – म आफ्नो शरीरका सबै अङ्गप्रत्यङ्गहरुलाई जान्दिनँ, शरीरका दुई सय छ हाडहरुको नाम थाहा छैन, आफ्नै शरीरको विभिन्न भागमा उमे्रका रौँका नाम पनि थाहा छैन । सम्भवतः तपाईँलाई पनि थाहा नहोला ।
विद्वानहरुले भन्ने गरेका छन् – आफ्नै प्रतिभालाई नचिनेर धेरै मानिस मर्दछन् । आफूभित्रको प्रतिभालाई कहिलेकाहीँ अरुले चिनाउनु पर्दछ । कतिपयले आफैँले आफ्नो प्रतिभालाई चिनेर त्यसैअनुरूप कार्य गर्दा प्रसिद्धि प्राप्त गरेका उदाहरणहरू हाम्रै वरपर छन् ।
मेरो वरपर रहेका अधिकांश वनस्पतिलाई चिन्दछु तर नाम थाहा छैन । मैले गोठालो जाँदा र घाँस काट्न जाँदा आफैँले काट्ने गरेका घाँसहरुको नाम मलाई थाहा हुँदैनथ्यो । मैले एकजना साथीलाई उसको घरका गमलामा रहेका फूलहरूको बारेमा सोधें । एक दुई फूलको नाम नै बताउन सकेनन् । नाम बताउन सकेका फूलहरूले वातावरणमा पार्ने प्रभावको बारेमा त बताउन सकेनन् । आँगनमा फुलेका फूलहरूको वैज्ञानिक नाम त झन् थाहा थिएन ।
यदि आफ्नै सन्तानलाई राम्ररी चिन्न सकेको भए सबै अभिभावकका सन्तान पढाइ वा उसको रुचिको अन्य क्षेत्रमा निकै राम्रो गर्न सक्थे । तर वास्तविकता हामीले देखिरहेका छौँ । समाज कस्तो छ भन्ने कुरो कतै लुकेको छैन ।
एक जनालाई सोधेँ – तपाईँ कुन ठाउँलाई बढी चिन्नुहुन्छ ? उसले आफ्नै गाउँको नाम बतायो । मैले अर्को प्रश्न थपेँ – तपाईँको गाउँ कहिले र कसरी बसेको हो तथा नामकरण कसरी हुन पुगेको हो ? उत्तरमा शून्यता आयो । गाउँमा स्थापित विभिन्न देवदेवीको स्थापनाकाल र पूजा हुनुपर्ने कारण तथा चलनको विषयमा प्रश्न राखें । धेरै कुरा बुझ्न बाँकी रहेको स्पष्ट ग¥यो । सोधेँ – तपाईँको गाउँमा रहेका जातिहरू कुन, कहाँबाट र कहिले तथा कुन परिस्थितिमा आए भन्ने विषयमा थाहा छ ? झन् यस विषयमा आफूले केही पनि बताउन नसक्ने बताउँदै भन्छन् – मलाई वर्तमानका तथ्याङ्कहरू थाहा छ । मैले अर्को प्रश्न थपेँ – तपाईँका परिवारका सम्पूर्ण सदस्यका नाम (मलाई सबैको नाम थाहा छ) को नेपाली, हिन्दी, बज्जिका वा अङ्ग्रेजी कुनै एक भाषामा अर्थ बताइदिनुहोस् । नामहरू सम्झँदै असमर्थता प्रकट गर्दछन् ।
संसारमा जान्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा झन् बढी छन् । चिन्नुपर्ने कुराको संसार कति विशाल छन् जो कल्पनाभन्दा पनि विशाल छ । हामीले ज्ञानको कुनै एक क्षेत्रलाई पनि निकै कम चिन्दछौँ । धेरै कुरा चिन्न बाँकी नै रहन्छन् । यसै कारण कुनै विद्वान्को ज्ञानको क्षेत्र निकै साँघुरो हुन्छ । यहाँ साँघुरोमा विशालता हुन्छ भन्न खोजिएको हो । कुनै एक विषयमा स्नातकोत्तर गरेपछि त्यसको एक छेउमा पिएचडि गर्दछन् र पिएचडिको पनि एउटा कुनाको विषयमा उसले डि.लिट्. गर्न पाउँछ । डि.लिट्. गर्नेले संसारमा आफ्नो क्षेत्र वा विषयको विशिष्ट नागरिकमा गणना हुन्छ ।
आचार्य चाणक्य भन्दछन् – पहिचान सबैको हुन्छ । साधारण पहिचानबाट विशिष्टतिर जानुपर्छ । विशिष्टता भनेको गहिराई हो । मेडिकल विषयमा कसैले डि.लिट् गर्दछन् भने उनले उपचार गर्ने रोग चाहिँ कुनै एउटा रोगको सानो अंश होला तर अहेव गरेकाले तत्काल सबै रोगको औषधि दिन सक्छन् । आचार्य चाणक्यले भनेको पहिचान चाहिँ लाखौँको भीडमा कसैलाई कसैले किन चिन्नु पर्दछ भन्ने हो । उसलाई कसैले किन चिन्नु पर्दछ भन्ने कुरो उसैले निर्धारण गर्ने हो । यसका लागि उसले आफूलाई चिन्नु पर्दछ । फेरि प्रश्न उठ्छ कि कोही कसैले आफैँलाई चिनेको हुँदैन र ? वा आफैँलाई पनि नचिन्ने कोही हुन्छ त ? चिन्ने प्रमाण के ? चिन्दछु भन्ने आधार के ? केही सूत्रहरू माथि नै आइसकेका छन् ।
चिन्नुपर्ने कारण हुन्छ । आफैँ सेभ गर्नेले आफ्नो गालालाई हर समय चिल्लो र आकर्षक पारिरहने सबै सामग्रीको नाउँ थाहा हुन्छ । तिनीहरू केबाट बनेका हुन् र कहाँबाट आउँछन् भन्ने विषयमा अलिअलि जानकारी राख्छन् । तिनका साइड इफेक्टस् के के हुन् भन्दा चुप लाग्छन् । र, जो सैलुनमा दारी काट्छन्, उसलाई यी प्रश्नहरू नै बेकार लाग्छन् । चिल्लो गाला परिचय बनाउन चाहने तर चिल्लोपनाबारे जानकारी नराख्ने हामी धेरै छौँ ।
अर्को यथार्थ हो – कोही कतै घमण्ड नगरे हुन्छ कि ऊ निकै जान्ने छ ।
कोही कुन क्षेत्रको जानकार छ भने सोही क्षेत्रको ऊभन्दा बढी जानकार अरु पनि छन् भन्ने कुरो उसले बुझेको हुन्छ । अझ कतिपयका आफन्तले प्रशंसाका पुल यसरी बाँध्दछन् कि उही संसारमा सबैभन्दा जान्ने छन् । आफन्तको प्रतिभामा गर्व गर्नु स्वाभाविक हो तर जो प्रतिभावान छ, उसले चाहिँ आफ्नै क्षेत्रमा आफूलाई कति चिनेको छ र अझ कति चिन्न बाँकी छ भन्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने हो । यतातिर ध्यान दिने चाहिँ प्रगतिको उकालोमा चढिरहेको हुन्छ र आफैँलाई निरन्तर जान्ने भनेर आफूले चिनेको क्षेत्रमै सन्तोष गर्नेले चाहिँ आफूभन्दा अरु कोही अगाडि बढिरहेको पाउँछ । अर्थात् आफ्नो परिचय साँघुरिएको बुझ्ने र नबुझ्ने दुवैथरि पहिचानको लागि सङ्घर्षरत हुन्छन् ।
कोही के गर्दैछ र के हो भन्ने कुरो आफँैमा महत्वपूर्ण छ । यस अर्थमा हरेक व्यक्ति विशिष्ट छ । हरेक व्यक्तिको विशिष्टता भनेकै उसको पहिचानसँग सम्बन्धित छ । हरेकले यसैलाई चिन्नु पर्दछ । यसलाई चिनेपछि उसलाई अरुले चिन्न थाल्दछ । पहिचान कायम हुनु भनेको यही नै हो ।
अब चिन्ने कुरो कसैले गर्दा म झस्किन्छु । मलाई लाग्छ मैले आफैँलाई चिनेको छैन । कोही कसरी दाबी गर्न सक्दछ कि म फलानोलाई राम्ररी
चिन्नेसित सङ्गत हुन्छ । आजभोलि धेरैका पाँच हजार साथी फेसबुकमा हुन्छन् । सङ्गत र साथीको अर्थ यहाँनेर बुझ्न मलाई अप्ठ्यारो हुन थाल्छ । मैले सङ्गत गरेको जति सबैलाई म चिन्दछु भनेर दाबी गर्दिनँ किनभने मैले माथि नै स्वीकार गरेको छु – म आफँैलाई चिन्दिनँ । मलाई आफ्नै वातावरण र वनस्पतिको बारेमा धेरै थाहा छैन
कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्छ मनमा – जब म आफैँलाई चिन्नमा यति कमजोर छु भने के म संसारकै कमजोर छु त ? यसरी भए पनि त ठीक हुन्थ्यो किनभने मेरो नाम गिनिज बुकमा आइसक्थ्यो तर यसो हुन सकेको छैन ।
सबैभन्दा जान्ने दाबी त गर्नै सक्दिनँ किनभने मलाई मेरै विषयमा थाहा छैन । के उसो भए मभन्दा पनि नजान्नेहरु छन् ? आफैंले आफैँलाई चिन्न नसक्नेले यस प्रकारको विषयमा सोच्नु मलाई बेकार लाग्न थालेको छ ।
वर्षौं सँगै बिताएका तर पछि कुनै कारणले छुट्टिएकाहरू पछुताउने गर्दछन् – मैले उसलाई समयमा चिन्न सकिनँ ।
कसैको उददगार हुन्छ – यतिका दिनपछि बल्ल म उसलाई चिन्दैछु ।
कोही भन्छन् – म उसको फलानो पक्षलाई मात्र चिन्दछु, त्यो पनि यी यी शर्त वा सीमाहरूभित्र रहेर ।
लकडाउनमा कृषि क्रान्ति गरौँ
कोभिड – १९ महामारी तथा लकडाउनमा बुद्धका उपदेशहरूको सान्दर्भिकता
समाज विकासमा युवा र अन्तरनिर्भरता सिद्दान्त
विवेक शून्य राजनीतिक युवा पुस्ता
मदन भण्डारीको हत्यारा कहिले पत्ता लाग्छ राष्ट्रपति ज्यू ?
सीमा नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी पैसाको लोभमा परेका त होइनन् ?
आगामी आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैँयाको बजेट सार्वजनिक
अब लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि उपलब्ध गराइने
गण्डकी प्रदेशमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु, अर्को एक जनाको शव पानीमा तैरिएको अवस्थामा फेला
परिवार आफन्त नभएका जेष्ठ नागरिकको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने
स्यानेटरी प्याडका लागि १ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई ल्याउन बजेट विनियोजन
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना थपियो
साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन
कोरोनाको कारण प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि एक अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन